Is qab-qabsi ka dhex jira maamulka Mahadaay – Hornafrik Media Network
Is qab-qabsi ka dhex jira maamulka Mahadaay
By Liibaan Nuur	 Last updated Dec 1, 2018
Jowhar (Hornafric)- Cabdullaahi Abuukarey Afarow Gudoomiye ku xigeenka Maamulka iyo Maareynta Degmada Mahadaay oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Gudoomiyaha Mahadaay uu sameeyay Musuq-maasuq.
Waxa uu tilmaamay in uu ku sameeyay Lacagaha canshuuraha ah, mid loogu talagalay dadkii Abaarta saameysay oo gaareysa $40 kun oo oo doolar iyo tan qoondada ee loogu talagalay Mas’uuliyiinta Maamulka iyo shaqaalahooda.
Cabdullaahi ayaa sheegay in bishii 5-aad ee sanadkaan wixii ka dambeeyay aan arag lacagaha Qoondada ah, waxa uuna ku sababeeyay in Gudoomiyaha uu qaatay, maadaama Wasaaradda Maaliyadda Hir-Shabeelle ay isaga usoo dhiibtay.
Dhanka kale waxa uu sheegay Gudoomiye ku xigeenka Maamulka iyo Maareynta Degmada Mahadaay Cabdullaahi Abuukarey in Dacwad ka dhan ah Gudoomiye Axmed uu u gudbiyay Gudoomiyaha Gobolka Shabeelaha Dhexe, Wasaaradda Maaliyadda Hir-Shabeelle iyo Xildhibaanada kasoo jeeda Degmada.
Maanta oo ku beegan 1-da Desembar ayuu tilmaamay in uu sugayo Jawaabta Maamulka Hir-Shabeelle, balse waxa uu rajo xumo ka muujiyay in uu helo Warcelin uu ku qanco.
Sababta waxa uu ku sheegay in mas’uuliyiinta Maamulka Degmada uu isbadal ku sameeyay, Wasiirka Arrimaha Gudaha Caadle waxa uu ka dalbaday in uu faragelin ku sameeyo si lamid ah Maamulkii Gobolka Hiiraan iyo Degmada Baladweyne.
Isqab-qabsiga dhanka maamulka ah ayaa ka taagaan Degmada Mahadaay, dadka deegaanka waxa ay ku sheegeen in is maandhaafka uu isku badalay in mas’uuliyiinta ay la kala saftaan shaqsiyaad ehelkood ah.
Ma jirto Jawaab kasoo baxay Gudoomiyaha Degmada Mahadaay ee dhaliisha loo jeediyay, waan idiin soo gudbin doonaa hadii aynu helno si uu ugu warceliyo eeddan ka dhanka ah.
Goorma ayay dhaceysa doorashada madaxtinimo ee Puntland?